Bido na ule A / B site na ihe asaa a | Martech Zone
Satọde, 13 Juun 2015 Douglas Karr
Ule na-aga n'ihu na-egosi dị ka otu n'ime ụzọ kachasị elu maka azụmaahịa ọ bụla iji bulie echiche, pịa yana ntụgharị na weebụsaịtị ha. Iwulite a usoro nyocha n'ihi na mbido peeji nke, ịkpọ oku, na email kwesiri ịdị na usoro mgbasa ozi ahịa gị.
Ozi ọma ahụ? Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike ịnwale maka njikarịcha! Akụkọ ọjọọ ahụ? Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike ịnwale maka njikarịcha. Mana ihe omuma anyi ohuru n’egosiputara gi ebe di nma iji malite.
Banye na A / B Ule nwere ike itu egwu, yabụMpempe akwụkwọ emepụtala ihe omuma a iji nyere gị aka ịmalite. Nke a bụ ihe 7 ị nwere ike ịnwale na ibe ọ bụla iji nyere aka ịbawanye ọnụego ntụgharị:
The nha oyuyo nke ihe onyonyo a na peeji. A mara onyonyo buru ibu ka ọ na-abawanye ọnụego ntụgharị dị oke egwu.
Iji usoro iji wepụ ihe ọtụtụ ụdị ụdị na peeji nke ọdịda.
Na-agbakwụnye video na peeji. Aga m agbakwunye na iwepụ vidiyo ndị etolite etolite egosila na ị ga-eme ka ntugharị mụbaa
iji akụkọ gbara ọkpụrụkpụ nke na-eme ka onye na-agụ ya pịa-site na-enyere ha aka ịghọta uru nke onyinye gị.
Kpọọ ka Action na ule Ad iji bulie ọnụọgụ pịa-site na ọnụego, gụnyere nha, ọnọdụ, okwu na imewe nke bọtịnụ.
The olu nke ibe… Ọ bụ enyi na enyi, ngwa ngwa, ọkachamara, na-egosipụta, na-eyi egwu? Youzọ ị si akọrọ akụkọ gị dị oke mkpa na nsonaazụ ị rụzuru.
The agba eji na ibe gi. You maara na acha anụnụ anụnụ bụ agba ntụkwasị obi na nchekwa, ọbara ọbara bụ ngwa ngwa, oroma na-eme ihe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-atụrụ ndụ… agba nwere mmetụta na omume nzụta.
Tags: ule ulekpọọ ka emeagbactaCTA bọtịnụụdị ogologompempe akwụkwọisiakụkọoyiyi imageinfographicVidio Ahịatestingoluule weebụ